I-China 100% Cotton iDemo sleeve yamadoda T-Shirt PY-ND004 Ukukhiqiza nefektri | I-Pinyang
Isikibha selogo yangokwezifiso esingenalutho sesikipa sentamo
Incazelo yomkhiqizo: Ulwazi lwendwangu yesikibha, ngabe wazi kangakanani?
1. Siyini isisindo segramu?
Isisindo se-Gram sisetshenziswa kakhulu ukukhombisa ukushuba kwendwangu. Lapho isisindo sisikhulu, ingubo iyajiya. Isisindo seT-shirt ngokuvamile siphakathi kuka-160g no-220g. Uma incane kakhulu, izobonakala ngokusobala. Uma likhulu kakhulu, lizoba sultry. Ngokuvamile, kungcono ukukhetha phakathi kuka-180-260g. (imikhono emifushane ivamise ukuba u-180-220g, okuwubukhulu obufanele ukugqokwa. Izikibha ezinemikhono emide ngokuvamile zikhetha indwangu engu-260g, engeyohlobo olujiyile)
2. Iyini inombolo yegatsha?
Incazelo: amamitha wobude bezintambo zikakotini anesisindo esivamile sephawundi elilodwa.
Umucu Wokubala Okukhohlakele: intambo emsulwa kakotini enokubalwa okungu-18 noma ngaphansi, okusetshenziselwa kakhulu ukweluka izindwangu eziwugqinsi nezisindayo noma ukukhulisa nokuvula izindwangu zikakotini.
Intambo yokubala okuphakathi: 19-29 ukubala intambo kakotini. Isetshenziselwa ikakhulukazi izingubo ezinithiwe ngezidingo ezijwayelekile.
Intambo yokubala enhle: intambo engu-30-60 yokubala ukotini. Isetshenziselwa ikakhulukazi ama-knitwear aphezulu. Ukuphakama kwesibalo, kuyashesha ukuthamba. Izikibha zivame ukuba ngama-21 no-32.
3. Kuyini ukukama?
Isikibha intambo kakotini ingahlukaniswa ibe intambo ekhethiwe kanye nentambo ekamiwe.
Intambo ehlanganisiwe: isho intambo ephothiwe ngenqubo yokuphotha ehlanganisiwe, eyaziwa nangokuthi intambo engahlanganisiwe.
Intambo ehlanganisiwe: isho intambo ekhiqizwe ngokungeza inqubo yokuthwebula entanjeni ejwayelekile ehlanganisiwe lapho iphothwa ngentambo ephezulu kakotini njengempahla eluhlaza. Ingaphezulu lendwangu lihlanzekile futhi lithambile.
4. Iyini inqubo yokuphrinta kweT-shirt?
Ukuphrinta isikibha kuhlukaniswe ngokuyisisekelo njengokuphrinta kwesikrini nokudlulisa ukuphrinta.
Ukuphrinta kwesikrini: ubuchwepheshe buyinkimbinkimbi, ikakhulukazi kufaka phakathi ukwakheka, ifilimu, ukuphrinta, ukomisa izinyathelo ezimbalwa. Izinzuzo zokuphrinta kwesikrini ukuphakama kombala okuphezulu, ukuqina nokuhlanzwa. Ngenxa yamanani aphezulu wokwenza izindleko zokuphrinta kwesikrini, ukukhiqizwa kwesisindo kuyadingeka ukunciphisa izindleko, ezingakwazi ukuhlangabezana nezidingo zokuphrinta okukodwa noma okuncane kwe-batch.
Ukudlulisa ukuphrinta: okwaziwa nangokuthi isitembu esishisayo. Izinzuzo umbala ogqamile nobuchwepheshe obulula. Okubi ukuthi ukuqina kwephethini kubi, akumeleki ukugqoka nokuwashwa.
5. Sishaywe kanjani isikibha?
Isici sokwelashwa kokuhlabelela ukususa i-fuzz eyakhiwe ebusweni bensimbi ngenxa yefayibha engenazinhlamvu ne-fiber ephumayo, ukuze indwangu ibushelelezi futhi ibe muhle, futhi umbala wendwangu ulingana, futhi ungaphrinta amaphethini acacile futhi amahle.
6. Ziyini izinzuzo zendwangu yesikibha yesikibha? Kungani ungeze i-spandex?
Indwangu kakotini emsulwa ibonakala ngesibambo esihle, ukuvikeleka okunethezekile nokwezemvelo, kepha kulula ukushwabana. Ukungeza inani elincane le-spandex kungathuthukisa ngokuphawulekayo izakhiwo zomzimba zendwangu, kukhulise kakhulu ukuqina kwendwangu, ngenkathi kugcinwa ukuthungwa nokunethezeka kukotini omsulwa. Ngaphezu kwalokho, ukufaka i-spandex entanyeni kungavimbela i-neckline ekukhululekeni nasekukhubazekeni, futhi igcine ukuqina okuhlala njalo kwe-neckline.
Isikibha esiyindilinga esingenalutho entanyeni, isikotini esihle, esithambile, esimsulwa nesemvelo, asikho izinto eziyingozi, siphephile futhi sikhululekile. Idizayini yentamo yabasebenzi bakudala, ikhululekile futhi ithambile, inamandla amakhulu. Izindwangu zezimfashini ezilula, ubuciko obuhle, ukunyakaza kwamahhala. Ubuchwepheshe bezimoto, ukuminyana kuyathuthuka, kufanelekile kahle. Inqubo yokuphrinta eyahlukahlukene, izingubo zomsebenzi ezenziwe ngokwezifiso, izingubo zephathi, izingubo zasekilasini, izingubo zomsebenzi, izingubo zethimba, izingubo zomzali nengane, njll.
Ukusetshenziswa komkhiqizo: ukukhangisa, i-Hoodie, izingubo zeqembu, ukwenza ngezifiso komuntu siqu, njll., Kungenza ngokwezifiso umbala, iphethini, ilogo.
Ubuchwepheshe: Izindlela Zokuphrinta Eziphrintiwe: Ukuphrinta kwedijithali
Indawo Yomsuka: Jiangxi, China Igama Lomkhiqizo: I-PIN YANG YU
Inombolo imodeli: PY-WW003 Isici: Anti-imibimbi, esiwuhogelayo, Plus Usayizi, Esimeme
Ikhola: O-Neck Indwangu Isisindo: 180 Amagremu
Inani elitholakalayo: Izinto ezingama-4480: 100% ukotini
Isitayela semikhono: Idizayini emikhono emifushane: Akunalutho, kwamukelekile ngokwezifiso
Uhlobo lwephethini: Isitayela sokuphrinta: I-Smart Casual
Uhlobo lwendwangu: Isikhathi sesikhathi sokuhola esibi kakhulu se-7: Ukusekelwa
Usayizi: Ngokwezifiso Usayizi Ilogo: Yamukela ngezifiso Ilogo
Umkhono: Ukupakisha iLeeve emfushane: 1pc / Opp Bag
Igama lomkhiqizo: amahembe wabesilisa Isizini: Ukugqoka kwehlobo
I-A1: Singumkhiqizi otholakala esifundazweni saseJiangXi, futhi sinenkampani engu-500㎡ eGuangzhou, eChina.
I-Q2: Asinayo ukwakhiwa kwama-tshirts manje, singakwazi ukwenza ama-tshirts?
I-A2: Yebo uqinisekile, ama-pls asitshela umbono wakho ngamashirt, umklami wethu uzokusiza uqedele ukwakhiwa.
Q3: Siyini isikhathi sakho sokulethwa?
I-A3: Isampula ngokujwayelekile izinsuku ezi-3-7 ngemuva kokukhokha, Nge-oda elenziwe ngokwezifiso, Kuya ngemikhiqizo nobungako.
I-Q4: Ngingahlangana nemiklamo ehlukile?
Q5: Iyini inqubomgomo yakho yesampula?
I-A5: Ngamasampuli enziwe ngezifiso, sizokhokhisa imali yesampula kepha sizoyibuyisa lapho inqwaba i-oda amasethi angaphezu kuka-100
I-Q6: Ngingathola inani eliphansi uma ngi-oda inani elikhulu?
I-A6: Yebo, amanani ashibhile anama-oda amakhulu kakhulu.
Q7: Ungaqinisekisa kanjani ikhwalithi yokukhiqiza?
I-A7: Sihlolisise ngaphambi kokuthumela, sizokhiqiza futhi mahhala uma kuyinkinga yekhwalithi evela ngakithi
I-Q8: Ngingathola konke okwenziwe ngezifiso lapha?
I-A8: Impela yebo; vele useluleke ngomusa ngezimfuno zakho ezikhethekile, sizowenza umsebenzi wenziwe.
Langaphambilini I-Round Neck Phrinta imikhono emide yamadoda T-Shirt PY-NC003
Olandelayo: Okuvamile Round-Neck imikhono iDemo Amadoda T-Shirt PY-ND005
Imibala Ngokwezifiso Ukotini Cargo Men Jacket PY -...
Ukotini Nelineni Retro V-Neck Long sleeve se Abesilisa T ...
I-T-Shirt Yabesilisa Abesilisa Ngokwezifiso PY-NC002
Imfashini Amathrendi Zip Hoodies Men Jacket PY-MJ005
Ihembe le-Hip-Hop Graphic Short Sleeve Men T-Shirt PY-ND002
Ukotini Uziphu Amadoda Amabhulukwe Ezemidlalo PY-NK002